သံလွင်: ထပ်ပြောရဦးမယ်…. အဘစိန်ရေ
၇ - ၉ - ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ စံတော်ချိန် ၁၆း၃ဝ နာရီ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့ စံတော်ချိန် (၆းဝဝ) နာရီအချိန် ကျွန်တော့် ထံသို့ ရောက်ရှိလာသော အီးမေးလ်စာ တစ်စောင်ကြောင့် ကျွန်တော်အထူး တုန်လှုပ် သွားခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းနေ့တွင် နာရေးကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) တွင် နာရေးကူညီမှု ဈာပန လမ်းကြောင်းမှာ စံချိန်သစ် တင်သွားခဲ့ကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယခုလို မိုးရာသီ အေးမြသော အချိန်ကာလများတွင် ယခင့်ယခင် နှစ်များစွာက ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားသူ ဦးရေသည် တစ်နေ့လျှင် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် (၄ဝ) ဦးရေမှ (၄၅) ဦးရေခန့်သာ ရှိခဲ့သည်။ ပူပြင်းလှသော နွေရာသီ အချိန်ကာလများတွင် သေဆုံးသူ ဦးရေအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် (၅ဝ) ဦးကျော်ခန့်သာ ရှိခဲ့ သည်။ သို့ရာတွင် ၇ - ၉ - ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် ညနေ ၄း၃ဝ နာရီ အချိန်လောက်မှာပင် နာရေးကူညီမှုပေါင်း (၅၇) ဦး ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်တော် တုန်လှုပ်ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထိုကဲ့သို့ လူ့လောကကြီးမှထွက်ခွာမှုများပြားနေခြင်းကို ကျွန်တော်တွေးတောစဉ်းစားမိတော့သည်။ လူရယ်လို့ လူ့ဘဝကြီးတွင် လျှောက်လှမ်း နေစဉ်ကာလအတွင်းတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော အာဏာအတွက်တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ အာဃာတ အတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ စီးပွားရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ ဘာသာရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ လူမှုရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ ပညာရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ၊ အချစ်ရေးအတွက် တိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲ စသည့် …. ဝိရောဓိစစ်ပွဲများကြောင့် လူသားတို့ သေကြေဆုံးရှုံးခဲ့ရမှုများကို တွေ့မြင်ရတော့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘဝစစ်ပွဲများ အား ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှုများတွင် အိမ်ထောင်ရေးစစ်ပွဲ၊ အချစ်ရေးစစ်ပွဲဟူသော စစ်ပွဲတွင် ကျဆုံးမှုများမှာ မပြောစလောက် ရှိသော်ငြားလည်း ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အာဏာ၊ လွတ်လပ်မှု၊ အာဃာတ ... စသည့်တိုက်ပွဲများတွင် ကျဆုံးမှုများသည် ရာခိုင်နှုန်းအား ဖြင့် များပြားမှုကို သိမြင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော ဝိရောဓိစစ်ပွဲများရပ်စဲသွားကာ ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာမြေပြင်၊ ငြိမ်းချမ်းသော မြန်မာ့မြေပြင်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမည်ဖြစ်တော့သည်။
ငြိမ်းချမ်းမှုများ မရမီစပ်ကြား ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးသမားများအနေဖြင့် အများပြည်သူတို့အပေါ် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကိုယ်ကျိုးစွန့်၍ အတ္တများကိုဖြုတ်ကာ ပေးဆပ်သွားရင်းဖြင့် ပြည်သူပြည်သားတို့၏ စောင့်ထိန်းရမည်ဖြစ်သော လူ့ကျင့်ဝတ်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားများကိုလည်း တတ်နိုင်သ၍ မှန်ကန်သော တရားမျှတသောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူ့အခွင့်ရေး အပြည့်အဝရရှိရေး လူမျိုးဘာသာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတို့အား လူသားခြင်းစာနာစိတ် မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးပမ်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးပြည့်ဝမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွန်တော် လက်တွေ့ခံစားရမှုတခုအား တင်ပြလိုတော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးဘာသာမရွေးတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိနေသည်ကို သိမြင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ လူရယ်လို့ လူ့လောကကြီးထဲ ရောက်ရှိခဲ့ ပြီးနောက် လူ့ဘဝကို လျှောက်လှမ်းပြီးသောအချိန် လူ့လောကကြီးမှ ထွက်ခွာသွားရသည့်အချိန်တွင် တသက်တာလဲလျောင်းနေရမည့် သုသာန်မြေအကြောင်းကို ကျွန်တော် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ သုသာန်မြေအကြောင်းဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် စာဖတ်သူအပေါင်းတို့အတွက် မင်္ဂလာမရှိခြင်း၊ ဆက်၍ မဖတ်ရှုလိုခြင်းတို့ကို စိတ်ထဲတွင် မပေါ်ပေါက်သင့်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်္ချိုင်းမြေဟူသည်ကား လူသား အားလုံးနှင့်ဆက်နွယ်၍ ပတ်သက်မှုရှိနေခြင်းဟူ၍ သာဓကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်က ဥပသာလက အမည်ရှိတဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးဟာ ရာဇဂြိုလ်မြို့ကိုရံပတ်ထားတဲ့ တောင်ငါးလုံးထဲက ဂုဇ္ဈကုဋ်တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီး တောင်ထိပ်ကမြေပြန့်လေးမှာ သူ့ ကိုမြုပ်ဖို့ သားဖြစ်သူကိုပြတယ်။ ပြီးတာနဲ့ တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါ ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တယ်။ အကျိုးအကြောင်းမေးပြီးတာနဲ့ ဘုရားရှင်ဟာ လူသေမမြုပ်ဖူးသေးဘူးလို့ ပုဏ္ဏားကြီးယူဆထားတဲ့နေရာကို လိုက်ကြည့်ပြီး ဒီဂါထာကို ဟောကြားပါတယ်။ ဒီဂါထာအဆုံးမှာ ပုဏ္ဏားကြီးဟာ သောတာပန်တည်ပါတယ်။ ဒီဂါထာဟာ သတ္တဝါတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိအောင် များပြားတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။
ပုဏ္ဏားကြီး သင်ယခုညွှန်ပြသောနေရာ၌ ဥပသာလကဟူသောအမည်ဖြင့် သင်၏အလောင်းကောင်ပေါင်း တစ်သောင်းလေးထောင်တိတိ မီးသင်္ဂြိုလ် လောင်ကျွမ်းမြုပ်နှံခဲ့ဖူးလေပြီ။ လောကမြေအပြင်၌ လူသေကောင်ပုတ် မမြှုပ်ဖူးသောနေရာဟူ၍ မရှိပေ။”
ထို့ကြောင့် ယခု ပြည်ပနိုင်ငံဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ မြို့အသီးအသီးတို့တွင် သုသာန်များအား လိုက်လံကြည့်ရှု လေ့လာသောအချိန်တွင် ကျွန်တော်များစွာ ကြေကွဲမှုကို စိတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတော့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မက အခြားသော ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် လူသားတို့၏ နောက်ဆုံးခရီးအားပို့ဆောင် သင်္ဂြိုလ်ပေးမှုလုပ်ငန်းများသည် များစွာလူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝကိုရရှိစေခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြည်ပနိုင်ငံကြီးများတွင် လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပါက မြေမြုပ်ခြင်း၊ မီးသင်္ဂြိုလ်ခြင်း စသည့် အသုဘအခမ်းအနားများ အတွက် ကုန်ကျငွေများသော်ငြားလည်း အသုဘပို့သူ၊ အသုဘရှုသူ အပေါင်းတို့အပြင် ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားရှာသောသူများအတွက်လည်း ငြိမ်းအေးမှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှု အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုတို့ကို တွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အေးငြိမ်းခံစားမှု ရသများကို ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ခရစ်ယာန်လူမျိုး တစ်မျိုးထဲတွင်မက ဂျူးလူမျိုး၊ ဟိန္ဒူ၊ အစ္စလာမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပါမကျန် ခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် မိမိမွေးရပ်မြေ မြန်မာပြည်အတွင်းတွင်သာ နောက်ဆုံးခေါင်းချချင်သော ဆန္ဒရှိခဲ့သော် လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ခေါင်းချခဲ့ရသော မြန်မာလူမျိုးများစွာရှိခဲ့သည်။ ထိုထဲတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များ ဖြစ်ကြသော အထင်ကရ ဆရာတော်များ၊ အနုပညာရှင်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ရသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ဘဝခရီးအား အေးချမ်းမှုဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ရပုံများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရကာ လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အဝကိုရရှိခဲ့သော လူပီသစွာရပ်တည်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ် ဂုဏ်ယူမိသော်ငြားလည်း ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့ဘဝခရီးအား အဆုံးသတ်ရမည့်မြေနေရာ (သုသာန်မြေ) များအားလည်း သန့် ရှင်းသပ်ရပ် ငြိမ်းချမ်းမှုရှိသော အထင်ကရပန်းခြံကြီးများကဲ့သုို့ ဖြစ်ပေါ်စေလိုသောဆန္ဒများ ပြင်းပြခဲ့ရသည်။ ယခုမူ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ သုသာန်များသည် မြို့ပြင်၊ ရွာပြင်များတွင် အခိုင်အမာတည်မြဲမှုမရှိခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် မြို့ပြင်၊ ရွာပြင်များတွင်သာမက မြို့လယ်ခေါင်၊ ရွာလည်ခေါင်များတွင် ခံ့ညား ထည်ဝါစွာဖြင့် အပန်းဖြေစရာ ဥယျာဉ်ခြံကြီးများအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တိုင်များ ထူထောင်ထားခြင်းကို တွေ့မြင် ရသည်။ ထို့အပြင် သုသာန်မြေအနီးရှိ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဈေးကွက်များသည်လည်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် လုံခြုံမှုရှိခြင်းကြောင့် အခြားသော ရပ် ကွက်များထက် ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုများကို တွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းတွင် သုသာန်မြေနှင့်နီးလျှင် မနေလိုခြင်း၊ သုသာန်မြေနှင့်နီးသော ကြောင့် ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းခြင်း စသည့် အယူသီးမှုများ လွှမ်းခြုံနေဆဲဖြစ်သည်။
ပြည်ပနိုင်ငံရှိ လူ့ဘဝ၏ နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်မြေနေရာ (လူသင်္ချိုင်း) ကိုမဆိုထားနှင့် ... ပြည်ပနိုင်ငံရှိ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသော ကြောင်၊ ခွေး၊ ယုန်၊ ငှက် စသည့်တိရစ္ဆာန်များ၏ နောက်ဆုံးခရီးမှတ်တိုင်ဖြစ်သော တိရစ္ဆာန်သင်္ချိုင်းများကပင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူသင်္ချိုင်းများထက် အဆပေါင်းမြောက်များစွာ သာယာမှု၊ အေးချမ်းမှု၊ သန့်ရှင်းမှုများဖြင့် ပြည့်စုံနေတော့သည်။ ယခုမူ မြန်မာပြည် တွင်းရှိ သုသာန်မြေများသည် ရှုပ်ထွေးလှသောချုံပုတ်များ၊ ညစ်ပတ်လှသော ရွံနွံများ၊ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောအုတ်ဂူများဖြင့် ခြောက်ခြား ဖွယ်ရာရှိနေသကဲ့သို့ အချို့သောဒေသမြို့နယ်များတွင် သုသာန်မြေများအား တူးဖော်ခံရခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ သိမ်းဆည်း ခံရခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့နေရဆဲ ဖြစ်နေရသည်။ ထို့ကြောင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပေးနေသူ ကျွန်တော့်အဖို့ “သေသောသူသည် သုသာန်သို့သာ သက်သက်သာသာ သွားသင့်သည်” ဟူသော ခံယူချက်အတိုင်း လူသားခြင်းစာနာ ထောက်ထားသောစိတ်ဖြင့် “ပြောရဦး မယ်... အဘစိန်ရေ” ဟူ၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ တိုက်တွန်းမှုတချက်၊ ဟစ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုထပ်မံ၍ “ ထပ်ပြော ရဦးမယ်... အဘစိန်ရေ” ဟူ၍သာ ထပ်မံ ကြွေးကြော်လိုက်ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် “သင့်ဘဝ လက်ရှိအချိန်နှင့် လက်ကျန်အချိန် ဇယား (သက်တမ်း ၇၅ နှစ်)” ဟူသော တွက်ချက်မှုဇယားအရ -
သင့်ဘဝ လက်ရှိအချိန်နှင့် လက်ကျန်အချိန်ဇယား (သက်တမ်း ၇၅ နှစ်)
သင့်အသက် သုံးပြီးသောအသက် လက်ကျန်ရက်
၇ဝ နှစ် ၂၅၅၅ဝ (ရက်) ၁၈၂၅(ရက်)
at 9/15/2012 03:17:00 PM